जर्जर र थिल्थिलो अर्थतन्त्रलाई शर्माले कहाँ पुर्‍याउलान्? « AayoMail
राजनीतिक अन्योल र कोरोना संकटबीच अन्ततः नयाँ सरकार गठन भएको छ।
कम्युनिस्ट सरकार र कोरोना भाइरस महामारीले जर्जर अनि थिल्थिलो बनेको अर्थतन्त्रले कसरी त्राण पाउला? अर्थतन्त्रको मजबुतीकरण, कोरोना महामारी नियन्त्रण र चुनाव नयाँ सरकारका मुख्य चुनौतीका रूपमा तेर्सिएका छन्।
सर्वाेच्च अदालतको परमादेशसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ‘अर्थतन्त्र’ को साँचो दिएका छन्।
यो सूचकलाई अर्थतन्त्रको लयमा मिसाउँदै अगाडि लैजान भने देउवा सरकारका अगाडि अनगिन्ती चुनौतीका पहाड तेर्सिएका छन्। र, सरकारको ढुकुटीको जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालयको बागडोरको साँचो जनार्दन शर्माको हातमा आइपुगेको छ।
एउटा कम्युनिस्टको बर्हिगमनसँगै देशको ढुकुटी फेरि कम्युनिस्ट खेमा (माओवादी) कै ‘लडाकु’ शर्माको काँधमा परेको छ।
भलै, प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भए पनि अर्थतन्त्रको जग मानिएको निजी क्षेत्रको मनमा भने एकपटक च्वास्स पक्कै भएको छ।
अब बढीमा डेढ वर्ष आयु भएको देउवा सरकारका अगाडि अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने, कोरोना भाइरस महामारीबाट आमजनतालाई जोगाउन सकेसम्म चाँडो पर्याप्त परिमाणमा भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने, पूर्वाधार र विकास निर्माणका कामलाई गति दिनेलगायत यावत चुनौती छन्।
सिंहदरबारबाट बाहिरिएको केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ मा जनताको भोट तान्न जसरी ‘बजेटको ललिपप’ सार्वजनिक गरेका थिए, अब ती यावत ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु देउवा सरकारको बाध्यता हुनेछ। र, यसको कार्यान्वयन जिम्मेवारी उनै शर्माको काँधमा छ।
पाँच वर्षे ‘म्यान्डेट’ पाएको ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन र दूरगामी सुधारका अपेक्षा गरिनु साढे तीन वर्षअघि स्वाभाविक थियो। तर, त्यसविपरीत अर्थतन्त्र उँभो लाग्नुको सट्टा अधोगतितिर जाँदा आमसर्वसाधारण र निजी क्षेत्र निराश भइरहेका थिए।
त्यसमाथि कोरोना भाइरस महामारीका तापले अर्थतन्त्रलाई यसरी गिजोलिदियो कि पछिल्लो दुई दशकयता पहिलोपल्ट अर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक हुन पुग्यो। यसको दोषजति ओली सरकारले कोरोना महामारीलाई दिए पनि अपजसको भारी भने उही ओली सरकारको टाउकोमा परेको थियो।
कोरोना भाइरस महामारीबाट गम्भीररूपले प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्र दुई दशकयता पहिलोपटक ऋणात्मक हुन पुग्नु नै देश अधोगतिमा गएको प्रष्ट सूचक हो।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कोरोना महामारीबाट आर्थिक वृद्धि दर पछिल्लो दुई दशकयता पहिलोपटक २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ। यो २०७२ सालको विनाशकारी भकम्पबाट सिर्जित आर्थिक क्षतिभन्दा उच्च हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा बिस्तारै सुधार आउने अपेक्षा तत्कालीन सरकारले गरेको थियो। ओली सरकारले नै मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर चालू आर्थिक वर्ष ४.०१ प्रतिशत रहने अनुमान गरे पनि तेस्रो चौमासिकबाट तीव्र गतिले फैलिएको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण अनुमानित वृद्धि दर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ।
गत आर्थिक वर्ष ऋणात्मक रहेको अर्थतन्त्रबारे ओली सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा अर्थतन्त्र साढे ६ प्रतिशत पुग्ने एउटा स्वैरकल्पना गरिदिए। नयाँ आर्थिक वर्ष पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने निश्चित हुँदाहुँदै असम्भव धनात्मक पुग्ने पौडेलको दाबी स्वैरकल्पना बाहेक अरू केही हुनै सक्दैन।
हो, यी र यस्तै लोकरिझ्याइँ गर्ने नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको ओली सरकारको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई कसरी, कुन कोण र कुन दिशाबाट कार्यान्वयन गर्लान्, यो सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो।
त्यसमाथि दातृ निकाय र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले सकेसम्म कम्युनिस्ट धारका सरकारलाई त्यत्ति रुचाउने गरेको पाइँदैन। भलै, नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाले नेतृत्व गरेको सरकार भए पनि राज्यको ढुकुटीको जिम्मा चाहिँ कम्युनिस्ट मन्त्री शर्माको भागमा पर्नु भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक खबर चाहिँ पक्कै होइन।
किनभने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र दाताहरूबाट अर्बौं परिमाणबराबरको ऋण र अनुदान सहायता पाउने अपेक्षामा केही तुषारापात भने हुनसक्छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘सुनाउन होइन, कायान्वयन गर्नका लागि सरकारले बजेट ल्याएको’ बताएका थिए।
अनि, उनले यो पनि भनेका थिए, ‘भोलिदेखि नै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएर बजेटमा निर्धारण गरिएका लक्ष्य हासिल गरिने छ। बजेटप्रति हामी जवाफदेही छौं। दैनिक कार्ययोजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन हुन्छ।’
हो, अब त्यसबेला पौडेलले भनेको कुरा सर्दै–सर्दै नयाँ अर्थमन्त्री शर्माको टाउकोमाथि आएर झुन्डिएको छ। तात्तातो बजेटमा निर्धारण गरिएका योजनालाई नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले रातो मसी धसेर काट्न पनि सक्दैनन्। काटौं, मतदाता रिसाउलान् भन्ने पीर, नकाटौं भने कार्यान्वयन गर्न जटिल।
त्यसमाथि अध्यादेशमार्फत पूर्णआकारको बजेट ल्याएको भनेर त्यसबेला विपक्षी गठबन्धनले आरोप लगाएको थियो। अहिले त्यही विपक्षी गठबन्धन सत्ता सम्हाल्न आइपुगेको छ। अब आफैंले विरोध गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्नु देउवा सरकार र अर्थमन्त्री शर्माका लागि ‘फलामको च्युरा चपाए’ सरह हुने निश्चित छ।
अब रह्यो अर्थतन्त्रलाई कोरोना भाइरस महामारीबाट जोगाउँदै ऋणात्मकबाट धनात्मक दिशामा लैजाने कुरो। यसअघि चारपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेको अनुभव सँगालेका देउवा र एकपटक शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री अनि अर्को पटक ऊर्जा मन्त्री बनिसकेका शर्माले अब मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी पार लगाउँछन्, हेर्दै जाऔं।